लक्ष्मीपूजाको दिन यी यस्ता कामहरू भुलेर पनि नगर्नुहाेस, अन्यथा ढोकाबाटै लक्ष्मी फर्किन्छिन्Namaste Nepal
लक्ष्मीपूजाको दिन यी यस्ता कामहरू भुलेर पनि नगर्नुहाेस, अन्यथा ढोकाबाटै लक्ष्मी फर्किन्छिन्
| २०७६, १० कार्तिक आईतवार १०:०३ , प्रकाशीत
नेपाली हिन्दु परम्परा अनुसार मनाइने दोश्रो ठुलो पर्व तिहार हाे । यसपटक कार्तिक १० गते राति लक्ष्मीपूजा परेको छ । लक्ष्मी पूजाका दिन महालक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजा गरिन्छ । लक्ष्मीपूजाका दिन देवी लक्ष्मीको आराधनासहित स्वागद गर्दै दियो बाल्ने गरिन्छ । यो दिन लक्ष्मीलाई खुशी राखे सुख, सम्वृद्धि तथा धनयोग हुने विश्वास छ । तर, लक्ष्मी पूजाको दिन केही विशेष कुरामा ध्यान पु¥याउनु भने पर्छ । अन्यथा घर आएकी लक्ष्मीसमेत फर्किने जनविश्वास छ ।
नगर्नुस् यस्ता काम: १) लक्ष्मीपूजाको दिन बिहान सबेरै उठ्नुहोस् । छिटो उठेर सरसफाइ सहित पूजापाठ गर्नुहोस् । २) लक्ष्मीपूजाको दिन नङ काट्नु हुँदैन । साथै दाह्री वा कपाल पनि काट्नु हुँदैन । ३) पूजा गर्ने स्थलमा क्रमशः बायाँबाट दायाँतर्फ भगवान गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती र कालीको मूर्ति राख्नुपर्दछ । त्यसपछि लक्ष्मण, राम र सीताको मुर्ति राखेर पूजा गर्नुपर्छ ।
४) लक्ष्मीपूजाको दिन उपहार दिन जाँदा छालाको वस्तु धारण गर्नु हुँदैन । साथै उपहारमा मिठाइ समेत थपेर दिनुहोस् । ५) लक्ष्मी पूजा गर्दा तालि बजाउनु हुदैन, साथै ठुलो आवाजमा आरती समेत गाउनु हुदैन । ६) लक्ष्मीपूजाको दिन झुट बोल्नु हुँदैन, तथा घरमा फोहोर राख्नु हुदैन । दया र दानको भावना राख्नुपर्दछ ।
७) देवी लक्ष्मीको पूजा गर्दा भगवान विष्णु साथमा नराखी उपासना गर्नुहुँदैन । यसलाई अपूरो मानिन्छ । ८) लक्ष्मीपूजाको दिन पूजा कोठा सफा र हरेक सामग्री मिलाएर राखिएको हुनुपर्छ । ९) लक्ष्मीपूजाको रातभरि अनिवार्य दियो बालेर राख्नुपर्दछ । १०) घरका सबै सदस्यले उत्तरतर्फ मुख फर्काएर उत्तरपूर्व दिशामा पूजा गर्नुपर्छ ।
११) पूजा गर्दा मात्र घिउमा दियो बाल्नुहोस्, दियो ११, २१ वा ५१ को संख्यामा हुनुपर्दछ । १२) आराधना गर्ने गणेशको मूर्तिको बसेको हुनुहुँदैन साथै सुँड दायाँतर्फ फर्केको हुनु हुँदैन । १३) लक्ष्मीपूजा गर्दा सकेसम्म रातो रंग भएका वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्थात दियो, मैनबत्ति, फूल लगायतका वस्तु रातो हुनुपर्छ ।
१४) लक्ष्मीपूजा गर्दा शुरुमा गणेशको पूजा गर्नुपर्छ । कुनै पनि पूजामा गणेशको आराधना पहिले गर्नुपर्छ । १५) देवी लक्ष्मीलाई शान्तिप्रिय मानिन्छ, तसर्थ परिवारका सदस्यबीच सो दिन झगडा हुनुहुँदैन । १६) लक्ष्मीपूजामा घरका सबै सदस्यले एकैसाथ मिलेर लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्छ ।
१७) लक्ष्मीपूजाको दिन माछामासु, मदिरा तथा धूम्रपानको सेवन गर्नुहुँदैन । १८) लक्ष्मी पूजाको दिन सकेसम्म सात्विक तथा शाकाहारी भोजन गर्नुपर्छ ।
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ नोभेम्बर ०२ तारिख,